Fooyya`oota Galmee Walmadaalsisuu
Faankishiniin durargii LibreOffice keessatti galmeewwan barruu fi galmeewwan wardiif argama.
Wajjin barreessaa ykn keeddebistu tokko kan galmee xabboo barreeffamake gartooman akka qabduti yaadi. Guyyaa tokko garagalchoota galmeeke keeddebiitoota hundati ergita. Garagalcha gulaaluuf isaan gaafata akkasumas duubatti ergita.
Osoo barreessaan tokko galmee kuusuu isaanii malee jijjiire, galmee jijjiirame galmee xabboo waliin walmadaalsisuu dandeessa.
Yeroo hundaa galmee haaraa banuudhaan jalqabi itti aansuudhaan galmee duraa galmee haaraa waliin walmadalsisi.
Qaaqan filannoo faayilii mul`ata. Galmee xabboo duraa kee filuudhaan qaaqa dhugoomsi.
LibreOffice galmeewwan lamaan gara galmee keeddeebistuuti maka. Keewwatni barruu hundi galmee keeddebistu keessatti uumamu garuu xabboodhaan akka saagameetti adda hin bahan, akkasumas keewwatoni barruu hundi keeddebistuutiin haqaman akka haqamati adda bahu.
Saaguu fi haqama fudhuu ykn gatuu ni dandeessa. Dhumarratti galmee keeddeebistu akka xabboo haaraati maqaa haaraa waliin tarii olkaa`uu ni dandeessa.
Kuusuu fi agarsiisuu Jijjiirraa
Jijjiirraa fudhuu ykn Gatuu
Title is: Fooyya`oota Galmee Walmadaalsisuu